विदेशीहरुले जापानमा सामना गर्नुपर्ने कठिनाइहरु | Nepali In Japan
May 21, 2019 July 27, 2021
नेपालमा हुँदा सोचेजस्तै गरि जापान बसाइ सजिलो पक्कै पनि छैन । भाषागत बाधा लगायतका थुप्रै व्यवधानहरुले यहाँको बसाइलाई सोचेभन्दा कठिन बनाइदिन्छ । आजको लेखमा यसै विषयमा केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
तपाइको अनुभव सहकर्मीको जस्तो नहुन सक्छ
तपाइको अनुभव कुनै पनि जापानीको अनुभवको तुलनामा भिन्दै हुन सक्छ । तपाइ छुट्टै संस्कारमा हुर्किएर हजारौं मिल टाढा आएर नयाँ जीवनशैली अपनाउनु हुन्छ । जापानी सहकर्मिले यो अवस्था केही कठिन हुने सोचे पनि उनीहरुले तपाइ के कस्ता अवस्थाबाट गुज्रिरहनुभएको छ भन्ने कुराको भने हेक्का नराख्न पनि सक्छन् ।
शुरुका दिनमा तपाइले अपार्टमेण्ट, फर्निचर, बैक खाता लगायतका सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले शुरुमा यो तपाइलाई निकै महंगो लाग्न सक्छ । विस्तारै विस्तारै यहाँको परिस्थीतिसँग भिज्दै गएपछि बानि पर्दै जान्छ ।
एउटै घरमा नबसे पनि प्राय जापानीहरुका अभिभावक उनीहरुभन्दा केही थोरै दूरीमा मात्रै बसेका हुन्छन् । समस्या पर्दा उनीहरुले पारिवारिक सहयोग पाउँछन् तर तपाई हजारौं माइल टाढा आउनुहुन्छ यसकारण आवश्यक पर्दा पारिवारिक सहयोग छिट्टै पाउन सकिंदैन । यसैकारण शुरुमा त एक्लै बस्दा एक्लोपनको महसुस पक्कै पनि हुन्छ । तर समय वित्दै गएपछि भने तपाइको सामाजिक नेटवर्क पनि बढ्दै जान्छ ।
विदेशी कामदारलाई केही त्यस्ता प्रतिबन्धहरु लगाइएका छन् जो जापानी कामदारका लागि भने तोकिएको छैन । तर नियममा रहेर जागिर परिवर्तन गर्न भने कुनै रोकतोक छैन । यसका लागि आफूले जागिर परिवर्तन गरेको बारे अध्यागनमा जानकारी गराउनुपर्छ । तपाइको नयाँ जागिरको प्रकृति तपाइसँग भएको भिसा प्रकारसँग मेल खाने हुनुपर्छ । जगिर छोडेको तीन महिनाभित्र नयाँ जागिर खोजीसक्नुपर्छ ।
जापानी भाषा सिक्न गाह्रो नै छ, विशेषगरि खान्जीका कारण धेरैलाई समस्या हुन्छ तर निरन्तरको अध्ययनपश्चात भने भाषा राम्रो बन्छ । जापानी भाषाको ज्ञान नहुँदा दैनिक जिबनयापनमा समेत समस्या आउनसक्छ तर भाषाको ज्ञानबाट हुने लाभ भने अनगिन्ती छन् ।
मैले भनेको बुझेको हो?
आफूले भनेको अरुले बुझुन् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । तर आफूलाई लागेको कुरा बुझाउन नसक्दा निकै पिडा पनि हुन्छ । जापानी भाषाको ज्ञानको अभावले गलत बुझाइ, काममा गल्ती, अवसरको कमी जस्ता बेफाइदाहरु पनि हुन्छन् ।
जापानमा भेदभाव विरोधी कानून छ जसले जुनसुकै देशको नागरिक भएपनि बराबर तलव र व्यवहार गरिनुपर्ने बताउँछ । तर शत हो प्रतिशत बराबरी भने हुँदैन । जापानी भाषाको ज्ञान भएकै कारण तलव बढी हुने वा काममा बढुवा भएका उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । कतिपय कार्यस्थलमा विदेशी भएकै कारणले आफु हेपिएको हुँ कि भन्ने अनुभव हुन्छ ।
जापानमा अधिकांश मानिसहरु काम गर्न आउने सपना देख्नुको एउटा कारण यहाँको संस्कृतिप्रतिको माया पनि हो । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जापानको साँस्कृतिक मान्यताहरुको बेग्लै पहिचान छ । तपाइ हुर्केको र जापानको संस्कृति भिन्दा भिन्दै भएपनि यो नयाँ कुरा सिक्ने एउटा मौका पनि हुन सक्छ ।
तपाइको राष्ट्रमा के छ?
जापानीहरु अन्य राष्ट्रको जीवनशैलीबाट प्रभावित हुन्छन् । जापानीहरुसंगको भेटघाटका क्रममा तपाइलाई आफ्नो देशका बारेमा लभग सबै कुराका बारेमा प्रश्न सोध्न सक्छन् । यसले आफ्नो देशका बारेमा जापानीहरुलाई बताउने मौका मिल्छ र जापान बसाइ आफ्ना देशको अनौपचारिक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ ।
विवाद जापानमा धेरै हुँदैन । अन्य राष्ट्रमा बोलिने भाषामा सिधा हुन्छ तर जापानी भाषामा भने हरेक कुरा सोचविचार गरेर मात्रै बोलिन्छ ।
जापानी संस्कृतिबारे जति नै राम्रोसँग बुझे पनि कतै न कतै गए केही न केही भूल त पक्कै भइहाल्छ । भुल गरेको महशुष गर्नुभयो भने झुकेर माफी माग्नुपर्छ । माफी माग्नुले धेरै समस्याको समाधान गर्छ ।
देश छाडेर हिडिसकेपछि जे जस्ता समस्या आएपनि समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । आत्तिनुहुँदैन । 🙂
Prevजापानीहरुकोको औसत मासिक तलब, उचाई र आयु कति हो?
Nextसुन्दर छालाका लागि खानैपर्ने जापानी खानाहरु